Iindaba - Iimpawu kunye nemigangatho yomatshini wokumisa iintlanzi
Imaski yeentlanzi kufuneka ihlangane ne-EU en149: 2001 P3 esemgangathweni. Isetyenziswa ikakhulu ukuthintela uthuli oluhle kakhulu lweshishini kunye nomsi wentsimbi ngexesha lokusebenza kwe-welding. Ngaphezulu kwe-99% yazo inokusebenza ngokuhluza, okulungele ngakumbi imeko emanzi neshushu okanye ukunxiba ukhuseleko ixesha elide; kufanelekile ukukhuselwa ngothuli kulwakhiwo, ukumbiwa kwamatye, ilaphu, ukugaya, ukuphosa isinyithi, amayeza, i-elektroniki, amayeza, ukwenziwa kwezinto kunye nokusila kunye namanye amashishini. Inesiphumo esihle sokungabi nothuli kwisaqhwithi sentlabathi.
I-Bangyin yohlobo lweentlanzi ezisebenza ngomatshini ngumatshini ozenzekelayo wokusonga imveliso yemaski. Isebenzisa itekhnoloji ye-ultrasonic ukubopha umaleko we-3-5 wamalaphu e-PP angalukwanga, ikhabhoni esebenzayo kunye nezinto zokucoca ulwelo, kunye nokusika umzimba wokugoba. Ngokwezixhobo ezahlukileyo ezisetyenzisiweyo, iimaski ezivelisiweyo zinokuhlangabezana nemigangatho eyahlukeneyo enje nge-ffp1, FFP2, N95, njl. Uluhlu lwelaphu lokucoca ulwelo lwesigqubuthelo lunefuthe lokucoca ulunge, elilingana kakuhle nemilo yobuso baseAsia, kwaye linokusetyenziselwa ulwakhiwo, imigodi kunye namanye amashishini angcoliseko oluphezulu.
Imisebenzi kunye neempawu zomatshini wokufihla iintlanzi
1.inokuqhubekeka ukusonga umzimba womaski onje ngohlobo lwentlanzi ukusonga uthuli lomatshini, onokuqwalaselwa ngaxeshanye.
2. PLC ulawulo oluzenzekelayo, ukubala ngokuzenzekelayo.
3. Isixhobo esilula sokuhlengahlengisa, kulula ukugcwalisa ipetroli.
4.Umbumbulu usebenzisa imo yokutsala kunye neyokubuyisela endaweni, enokuthi ikhawuleze ithathe indawo yokubumba kwaye ivelise iintlobo ezahlukeneyo zeemaski.
5. I-aluminium alloy isetyenziswa kumatshini wonke, intle kwaye iqinile ngaphandle komhlwa.
6. Ukondla kunye nokufumana isixhobo.
7. Uzinzo oluphezulu kunye nereyithi yokusilela ephantsi.
ir filter mask, okanye imaski yokuhluza ngokulula. Umgaqo-nkqubo wayo osebenzayo kukwenza umoya oqukethe izinto ezinobungozi zihluzwe kwaye zicocwe ngesixhobo secebo lokucoca ulwelo, emva koko uphefumle.
Uhlobo lokuphefumla lonikezelo lomoya lubhekisa kumthombo womoya ococekileyo ohlukaniswe nezinto eziyingozi, othunyelwa ebusweni bomntu ngokuphefumla nge-catheter ngokusebenzisa isenzo samandla esifana necompressor yomoya, isixhobo esinyanzelekileyo sesilinda segesi, njl.
Uhlobo lweemaski zokucoca lolona lusetyenziswa kakhulu kwimisebenzi yemihla ngemihla. Iindlela zokukhetha kunye neemeko zokusetyenziswa kwezi maski zichazwe ngokweenkcukacha apha ngezantsi. Ubume bemaski yokuhluza kufuneka yahlulwe kubini. Omnye ngowona mzimba uphambili wemaski, onokuqondwa ngokulula njengesakhelo semaski; elinye licandelo lezinto zokucoca ulwelo, kubandakanya umcu wokucoca ulwelo lokuthintela uthuli kunye nebhokisi yeefilitha zeekhemikhali zentsholongwane. Ke ngoko, ekukhetheni nasekusebenziseni iimaski zokucoca ulwelo, ezinye iimveliso zeGuangjia zikunika oku kulandelayo, oko kukuthi, ungasebenzisa umzimba ofanayo, kwaye xa ufuna ukungqina uthuli kwindawo yokusebenza yothuli, unganxiba isihluzi esihambelana nomqhaphu, ukuze ukwazi ukunxiba imaski yothuli; Xa ufuna ukwenza uthintelo lwegesi kwindawo enetyhefu, buyisela umqhaphu wokucoca ulwelo, kunye nesixhobo kunye nayo Ibhokisi yeefilitha zeekhemikhali ezihambelanayo, ke iba yimaski yerhasi, okanye ngokweemfuno zomsebenzi wakho, ukubonelela ngokudityaniswa okungaphezulu
Intshayelelo emfutshane yezixhobo zokucoca ulwelo kwimaski
Izinto zokucoca ulwelo lweemaski zokhuselo zahlulwe zangamacandelo amabini, oko kukuthi, ubungqina bokuba luthuli kunye neyeza elinetyhefu. Umsebenzi wabo kukubhengeza iierosol eziyingozi, kubandakanya uthuli, umsi, amathontsi enkungu, iigesi eziyityhefu kunye nomphunga onetyhefu, ngezixhobo zokucoca ulwelo, ukubathintela ekuphefumlweni.
Ukusetyenziswa kweemaski ngokubanzi, iimaski kufuneka zibe bubungakanani obufanelekileyo, unxibe indlela kufuneka ichaneke, iimaski ziya kusebenza. Iimaski ezithengiswe kwimarike ngokubanzi zahlulwe zangonxantathu kwaye zenziwe ngekomityi. Imaski yoxande kufuneka ubuncinci ibe ngamacandelo amathathu obume bephepha ukuze ibe nokukhusela. Umsebenzisi kufuneka acinezele ucingo kwimaski kwibhulorho yempumlo, emva koko asasaze imaski yonke ecaleni kwebhulorho yempumlo, ukuze udlale indima efanelekileyo. Abantwana banokunxiba iimaski ezixande zoqhaqho, kuba ayinasimo simiselweyo, ukuba sibotshwe kakuhle, sinokuba kufutshane nobuso bomntwana. Isigqumathelo esenziwe ngekomityi kufuneka siqiniseke ukuba ubungqingqwa besigqubuthelo sobuso banele emva kokuba sincanyathiselwe ebusweni, ukuze umoya osemoyeni ungaphumi ngaphandle ukuze usebenze. Xa unxibe imaski emile ngekomityi, gubungela imaski ngezandla zozibini kwaye uzame ukuvuthela. Jonga ukuba kukho ukuvuza komoya ukusuka kumda wemaski. Ukuba imaski ayixinekanga, kuya kufuneka ulungelelanise indawo ngaphambi kokuyinxiba.
Ndifuna nini ukutshintsha imaski
1. Isigqumathelo singcolisiwe, njengamabala egazi okanye amathontsi
2. Umsebenzisi waziva ukuba uxhathiso lokuphefumla luyanda. Uthuli lokucoca ubungqina bomqhaphu: xa imaski ilingana kakuhle nobuso bomsebenzisi, xa umsebenzisi eziva emelana nokuphefumla okukhulu, oko kuthetha ukuba ikotoni yokuhluza igcwele amasuntswana othuli kwaye kufuneka itshintshwe.
3. Imaski yonakele
4. Phantsi kwemeko yokuba imaski kunye nomnyango womsebenzisi uvalwe kakuhle, xa umsebenzisi enuka ivumba leetyhefu, imaski entsha mayinganxitywa okwethutyana. Ngokombono wolwakhiwo lomzimba womntu, ukujikeleza kwegazi kwempumlo yempumlo kunamandla kakhulu.
umatshini wokwenza imaski, oomatshini ubuso ukwenza imaski, non elukiweyo ubuso imaski ukwenza umatshini, ithumbu nokubotshwa umatshini, umatshini wokwenza imaski engalukanga, umatshini wobuso bomaski,